Sakafo Pork Teriyaki - Fomba Fanamboarana
ny fomba fahandro rohy mafana ao anaty lafaoro
Resipeo lasopy vorontsiloza turkey
ny fomba fanamboarana lovia voankazo misy dip
Sakafo Pork Teriyaki
Pork Teriyaki dia iray amin'ireo fomba matsiro indrindra hanomanana tenderloin-kisoa. Fonosina miaraka amina tsiro umamiom-bava, ny henan-kisoa teriyaki dia azo atao matsatso, atao anaty lafaoro, na amboarina ao anaty vilia fandrotsahana.
Masiaka sy ambany tavy, a masaka henan-kisoa masaka tanteraka dia hena voadidy menaka malefaka, ary be ranony tokoa rehefa tsaboina tsara. Tena mandray soa avy amin'ny fandrahoana sakafo haingana amin'ny maripana avo sy ny fanosorana ranona na saosy manankarena, toy ny teriyaki marinade ho an'ny kisoa.
Rehefa manao teriyaki henan-kisoa ianao dia aza manao fahadisoana amin'ny fividianana valahan-kisoa ho solon'ny tenderloin. Na dia mitovy be aza ny fihaviany, dia avy amin'ny faritra hafa amin'ilay biby ny loan-kisoa, ary tapaka matavy sy henjana kokoa izay misitraka bebe kokoa avy amin'ny fanendasana ambany sy miadana.
Ny tenderloin-kisoa dia hena varingarina ary tsy manify ary tonga lafatra amin'ny fametahana medaly, araka ny iantsoana an'ity recette tenderloin henan-kisoa teriyaki ity. Tandremo fa ny felam-kisoa dia matetika manana faritra matevina misy fifamatorana fotsy fotsy amin'ny volafotsy amin'ny faritra sasany, fantatra amin'ny anarana hoe 'silverskin.' Ny hoditra silvers dia tsy manalefaka amin'ny fandrahoan-tsakafo, ary mila hodiovina alohan'ny handrarahana azy. Fotsy / volafotsy ny lokony. Atsofohy eo ambanin'ity sombin-kazo ity ny antsy ary esory alohan'ny hanamasinana na handrahoana.
Misafidy saosy matevina Teriyaki
Ny saosy Teriyaki dia vita amin'ny saosy soja ho fototra ary misy siramamy volontsôkôla ho an'ny mamy sy tongolo lay ary sakamalao ho an'ny tsiro. Ny siramamy no mahatonga ny teriyaki ho marinade tsara ho an'ny hena. Rehefa mitambatra amin'ny siramamy na karbôsy mandritra ny fandrahoana sakafo ny proteinina amin'ny hena, dia glasy vita amin'ny karamela mahafinaritra.
Raha mividy teriyaki tavoahangy ianao dia aza hadino ny mahazo ny saosy teriyaki matevina (tianao ny tsy fitovizan'ny saosy bbq, fa tsy ilay mando toy ny saosy).
ny fomba fahandro hena henan-kisoa ao am-patana
Resaka Teriyaki misimisy kokoa izay ho tianao
Akoho Teriyaki - Endasina malefaka sy matsiro.
Fonosana vita amin'ny ravinkazo Teriyaki Shrimp - Sakafo mora!
Akoho Lo Mein
Ahoana ny fomba hanaovana Teriyaki Pork Tenderloin
Teriyaki Pork Tenderloin amin'ny grill dia mora tahaka ny 1,2,3:
Afetaho ao anaty sakamalaho ny valahin-kisoa ary ampitombohy hatramin'ny 1/2 ″ matevina.
Mandrosoa saosy teriyaki (ora 4-5 raha manam-potoana ianao)
Apetaho amin'ny grill medium-heat, 3-4 minitra isaky ny lafiny (haingana) !!
Aza adino fa ny henan-kisoa dia tokony hahandro hatramin'ny 145 ° F ary mety ho mavokely kely eo afovoany. Minitra vitsivitsy monja no mila ny lafiny tsirairay.
Aroso amina bun na vary amboniny steak broccoli ary mankafy! Mitrandraka ireo horonan-taratasy foana izahay Dibera tongolo gasy vita an-trano ho an'ny tsiro mahafinaritra. Ampio kôkômbra sy cilantro vitsivitsy ho an'ny freshness ary mankafy!
Raha tsy mahatratra ny mitono ianao, dia azo atono ao anaty lafaoro ny henan-kisoa teriyaki. Apetaho amin'ny lapoaly voahidy (ny saosy teriyaki miraikitra sy sarotra diovina) ary atotaho 4 ″ avy amin'ny hafanana mandritra ny 5 minitra isaky ny lafy na mandra-pahatongan'ny henan-kisoa 145 ° F.
Inona no mandeha amin'ny Teriyaki Pork
Teriyaki henan-kisoa mandeha tsara miaraka coleslaw , kimchee mafana episy, ary nendasina ovy .
ny fomba fanendahana ovy mena zaza
Matetika izahay no manolotra an'io amin'ny salady vaovao Salady Kale mora miaraka amin'ny akanjo voasarimakirana vaovao , Salady katsaka vaovao na mora Salady ovy .
Mahafinaritra tokoa! Ankafizo!
Sandwich Teriyaki Pork Barbecued Sandwich
Fotoana fanomanana10 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo6 minitra Marinating Time4 ORA Fotoana manontoloroa-polo amby minitra Fanompoana8 servings MpanoratraHolly Nilsson Pork Teriyaki dia iray amin'ireo fomba matsiro indrindra hanomanana ny felam-boan-kisoa. Fonosina amin'ny tsiro umamiom-bava, ny henan-kisoa teriyaki no tianao indrindra. pirinty Pin
▢rOA Torkloin-kisoa (1 kilao avy) Hetezo isaky ny 4-5
▢rOA kaopy saosy teriyaki alao antoka fa saosy matevina io
▢rOA ankamaroan'ireo tongolo nivava
▢rOA nivava tongolo maintso tsy voatery
▢sesame ho an'ny haingo tsy voatery
Hetezo ny ravin-kisoa tsirairay ao anaty faritra 4-5, farantsa kisoa mandrapaha matevina ½ '.
Mandroroa medaly henan-kisoa amin'ny saosy teriyaki sy silika tongolo mandritra ny 4-6 ora
Afanaina aloha ny grill. Amboary ny Pork Medallions amin'ny avo 3-4 minitra isaky ny lafiny
Raha ilaina dia apetaho amin'ny lovia fandrahoana ny tongolobe ary atsatsiho mandritra ny 5 minitra mandra-pahalemy, manetsiketsika indraindray. (Araho tsara ny tongolobe mba tsy hirehitra)
Mamafaza henan-kisoa miaraka amina sesame sy tongolo maintso raha ilaina.
Tianay ny manompo ireo medaly henan-kisoa amin'ny horonana voaharoharo misy tongolo maintso voatetika. Manompoa dia mankafiza!
Kaloria:315,Karbohidraty:37h,Proteinina:26h,Tavy:5h,Tavy mahavoky:1h,Cholesterol:53levitra,Sodium:1439levitra,Potasioma:483levitra,Fibre:1h,Sugar:6h,Vitamina C:2.1levitra,Kalsioma:72levitra,Vy:2.9levitra
Teny lakilehenan-kisoa voaendy, henan-kisoa voaendy, henan-kisoa, Teriyaki Pork Mazava ho azyMain course masakaAmerikanina, aziatika© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .